Dagaallo Udhaxeeya Al Shabaab iyo Ciidamo Huwan Ah Oo Ka Socdo Deegaanno Katirsan Sh/Hoose.
Monday February 12, 2018 - 10:59:07 in Wararka by Super Admin
Dagaallo culus ayaa dib uga qarxay deegaanno katirsan gobolka Shabeelaha Hoose waxaana jira khasaara ka dhashay dagaallada.
Wararka ka imaanaya deegaanno dhanka galbeed uga beegan magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo culus ay ka qarxeen kadib markii ciidamo huwan ah ay saaka aroortii hore duullaan ballaaran qaadeen.
Dagaal culus ayaa ka socda deegaannada Ugunji iyo Mubaarak oo dhammaantood hoostaga degmada Awdhgeele ee Sh/Hoose, dagaallada ayaa u dhaxeeya xoogaga Shabaabul Mujaahidiin iyo ciidamo huwan ah oo isugu jira Mareykan iyo AMISOM.
Wariye ku sugan Sh/Hoose ayaa soo sheegay in qaraxyo lala eegtay gaadiid ay la socdeen ciidamo caddaan ah kadibna waxaa bilaawday dagaal fool ka fool ah, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Mujaahidiinta ay weeraro dhabbagal ah u dhigeen ciidamada shisheeye oo saaka aroortii hore qabsaday Mubaarak, Daarusalaam iyo Ugunji.
Hugunka Rasaasta iyo qaraxyo ayaa laga maqlayaa deegaannada ku teedsan wabiga Jiinkiisa, wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamo kasoo baxay dhanka Garoonka diyaaradaha Balidoogle oo cirka ay ka taageerayaan diyaaradaha Drone-ka loo yaqaan iyo ciidamo kale oo ka baxay Muqdisho ay weerar culus ku qabsadeen deegaannada lagu dagaallamayo.
Sarkaal Katirsanaa Waaxda Canshuuraha Oo Degmada Dayniile Lagu Dilay.